गएको स्थानिय चुनावमा प्रचण्डको क्षेत्रमा कसले कति मत ल्याए ! | Kendrabindu Nepal Online News
657424 30419 485586 141419
गएको स्थानिय चुनावमा प्रचण्डको क्षेत्रमा कसले कति मत ल्याए !
८ कार्तिक २०७४, बुधबार ०८:३५
चितवन, ८, कात्तिक
आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नम्बर ३ बाट माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले उम्मेदवारी दिने भएपछि देशभर चर्चा छ । गत स्थानीय तह निर्वाचनमा यसक्षेत्रमा वाम गठबन्धनको मत कांग्रेस–राप्रपा गठबन्धनको भन्दा आठ हजार बढी छ । यस क्षेत्रमा पर्ने भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर र उपमेयरका लागि कांग्रेस र माओवादीले गठबन्धन गरेका थिए । भरतपुर महागनरका १९ वडाका वडाध्यक्षमा दुवै पार्टी प्रतिस्पर्धी थिए । ती वडाका अध्यक्षका उम्मेदवार र माडी नगरपालिकाका वडाध्यक्ष उम्मेदवारको मत विश्लेषण गर्दा वाम गठबन्धन अगाडि देखिएको हो ।
माडी क्षेत्रबाट दोस्रो संविधानसभामा विजयी राप्रपा प्रजातान्त्रिकका विक्रम पाण्डे कांग्रेससँग मिलेर प्रचण्ड विरुद्ध निर्वाचन लड्दैछन् । कांग्रेसले साथ दिने भएपछि उनलाई पनि बलियो उम्मेदवार मानिएको छ । क्षेत्र नम्बर ३ मा पर्ने भरतपुरका १९ वटा वडामा एमालेले कुल २१ हजार पाँच सय ३९ मत पाएको छ । त्यस्तै माडी नगरपालिकामा चार हजार दुई सय ३८ मत ल्याएको छ । यस क्षेत्रमा एमालेको कुल मत २५ हजार सात सय ७७ छ । त्यस्तै भरतपुरमा माओवादीका वडाध्यक्ष उम्मेदवारले १४ हजार तीन सय ६४ र माडी नगरपालिकामा तीन हजार सात सय ६६ मत पाए । उसको जम्मा मत १८ हजार एक सय ३० छ । यस क्षेत्रमा वाम गठबन्धनले पाएको जम्मा मत ४३ हजार नौ सय सात छ ।
यस्तै क्षेत्र नम्बर ३ मा पर्ने भरतपुरका १९ वटा वडामा नेपाली कांग्रेसका वडाध्यक्षहरूले प्राप्त गरेको कुल मत २३ हजार चार सय ८७ छ । माडी नगरपालिकामा कांग्रेसका वडाध्यक्षले तीन हजार चार सय ३६ मत प्राप्त गरेका छन् । दुवै गरी कांग्रेसको कुल मत २६ हजार नौ सय २३ छ। लोकतान्त्रिक गठबन्धनकै राप्रपाका वडाध्यक्षले भरतपुर महानगरका १९ वटा वडामा पाँच हजार दुई सय ३८ ल्याएका थिए । माडीमा राप्रपाका वडाध्यक्षले कुल तीन हजार एक सय १४ मत ल्याएका छन् । राप्रपाको कुल मत आठ हजार तीन सय ५२ छ । कांग्रेस र राप्रपाको कुल मत ३५ हजार दुई सय ७५ छ । यस क्षेत्रमा लोकतान्त्रिक गठबन्धनको भन्दा वाम गठबन्धनले आठ हजार ६ सय ३२ मत बढी पाएको छ ।
prachanda ko chetra ma mat kati
Prevआगामी चुनावमा कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले भोट हाल्न नपाउने
घोषणापत्र बिनै भोट माग्दै गठबन्धनका उमेदवारहरुNext